ကွမ်းရွက် ရဲ့ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများ…. – Shwe Thoon 8 Online Media
ကွမ်းရွက် ရဲ့ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများ….
August 28, 2021 August 28, 2021 shwe0Comments
ကွမ်းရွက်ကို များသောအားဖြင့် အိန္ဒိယမှာ အသုံးများကြပါတယ်။ မူလရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ခံတွင်းအနံ့အတွက်သုံးတာဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများတဲ့အတွက် ဆေးဘက်ဝင်တဲ့အရွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆီးချိုရောဂါသမားတွေအတွက် ကလူးကို့စ်ပမာဏကို ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကင်ဆာကိုကာကွယ်နိုင်ပြီး ကိုလက်စထရောနည်းစေပြီး သင့်ရဲ့နှလုံးကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကွမ်းရွက်မှာ ပိုတက်ဆီယမ်၊ ဗီတာမင်အေ၊ ဗီတာမင်ဘီဝမ်း၊ ဗီတာမင်ဘီတူးနဲ့ နိုက်ထရစ်အက်ဆစ် တွေအပြင် အခြားသော အာဟာရများစွာပါဝင်ပါတယ်။
၁) ဆီးချိုရောဂါအတွက် ကောင်းမွန်စေခြင်း
ကွမ်းရွက်က သွေးထဲက ကလူးကို့စ်ပမာဏကို လျော့ကျဖို့ကူညီနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုသမားတွေအတွက် အထူးသင့်တော်ပါတယ်။
သင့်သွေးထဲမှာ ကိုလက်စထရောပမာဏများနေပြီဆိုရင် လေဖြတ်ဖို့အခွင့်အလမ်းများပါတယ်။
၃) ကင်ဆာရောဂါကို ကာကွယ်ဖို့ကူညီနိုင်ပါတယ်။
ကွမ်းယာမှာပါတဲ့ဆေးရွက်ကြီးက အန္တရာယ်များတာမှန်ပေမယ့်ကွမ်းရွက်ကတော့ သူ့ချည်းသက်သက်ဆိုရင် ကင်ဆာရောဂါကိုတောင် ကာကွယ်နိုင်တဲ့ကွန်ပေါင်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ ဘက်တီးရီးယားတွေသေစေခြင်း၊ antioxidants တွေပါဝင်ခြင်း အထူးသဖြင့် phytochemicals ပါဝင်ခြင်းက ကင်ဆာရောဂါကို တိုက်ဖျက်ဖို့အကူအညီဖြစ်စေပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အောက်ဆီဂျင်နည်းပါးပြတ်လပ်မှုကို တိုက်ဖျက်နိုင်ပြီ ဖရီးရယ်ဒီကယ်တွေကိုလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။
ကွမ်းရွက်တွေမှာ သဘာဝအလျှောက် ဘက်တီးရီးယားတွေကိုသေစေတဲ့အစွမ်းရှိပါတယ်။ ဘက်တီးရီးယားတွေကြောင့် ကူးစက်ခြင်းကို တိုက်ဖျက်ဖို့ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ phenolic နဲ့ phytochemicals တွေပါဝင်တာကြောင့် ပိုးမွှားတွေကိုသေစေပြီး ကူးစက်မှုမဖြစ်စေအောင် အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
၅) အနာတွေကို ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။
အနာတွေကိုကုသပေးနုငိတဲ့အစွမ်းရှိပါတယ်။ antioxidants တွေအများကြီးပါဝင်တဲ့အတွက် သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ အောက်ဆီဂျင်ပြတ်လပ်ခြင်းကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အောက်ဆီဂျင်နည်းပါးတဲ့အခါ အနာတွေကျက်ဖို့နှေးစေပါတယ်။ ကွမ်းရွက်ကတော့ အနာကျက်မြန်ဖို့အကူအညီဖြစ်စေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မီးပူလောင်ခြင်းကဲ့သလိုအနာမျိုးကို သက်သာစေပါတယ်။
၆) ရင်ကြပ်ရောဂါကိုလည်း သက်သာစေပါတယ်။
ရင်ကြပ်ခြင်းဆိုတာက အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ လူတော်တော်များများက ရောင်ရမ်းခြင်းကနေဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာဆိုတာ မသိကြပါဘူး။ ကွမ်းရွက်မှာ ရောင်ရမ်းခြင်းကို လျော့ကျစေနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့အတွက် ရင်ကြပ်ရောဂါရှိသူတွေကို အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ ကွမ်းရွက်မှာ anti-histhamine အစွမ်းရှိတာကြောင့် ရင်ကြပ်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်သလို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
၇) စိတ်ဓာတ်ကျရောဂါကို အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းက ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကလူတွေကို ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ရောဂါတစ်ခုပါပဲ။ အမျိုးမျိုးသောစိတ်ငြိမ်ဆေးတွေကို ဈေးကွက်မှာဝယ်ယူပြီး သောက်သုံးနေကြပါတယ်။ ကွမ်းရွက်မှာ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကို မဖြစ်ပေါ်စေဖို့ အိမ်သုံးဆေးအဖြစ်ဆေးဘက်ဝင်တဲ့အကျိုးရှိပါတယ်။ အာရုံကြောကစနစ်ကို လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အပြင် ကွမ်းရွက်မှာ catecholamines ဆိုတဲ့ ဟော်မုန်း (serotonin နဲ့ dopamine) ကဲ့သို့ အာရုံကြောဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ဓာတ်တွေပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကို ပြေလျော့စေနိုင်ပါတယ်။
၈) အာခံတွင်းကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
အာခံတွင်းအနံအသက်ကောင်းစေဖို့အသုံးပြုကြပြီး အာခံတွင်းကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ သင့်ပါးစပ်အတွင်းမှာ ဘက်တီးရီးယားတွေတိုးပွားလာခြင်းကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ အာခံတွင်းဆိုင်ရာရောဂါတွေနဲ့ ကူးစက်မှုတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သွားနဲ့ခံတွင်းကျန်းမာရေးကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
၉) အစာအိမ်စနစ်ကိုလည်း အထောက်အကူပေးနုငိပါတယ်။
Antioxidant တွေပါဝင်ခြင်းက အစာအိမ်နာခြင်းနဲ့ အစာအိမ်စနစ်ပျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ကွမ်းရွက်က သင့်ရဲ့အစာအိမ်အနာကိုကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ သင့်ခန္ဓာကို်ယ်မှာ အောက်ဆီဂျင်နည်းပါးခြင်းကြောင့် ဂတ်တွေထုတ်လွှတ်ခြင်းကိုလည်း လျော့နည်းစေပါတယ်။ အစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
ကွမ်းရွက်နဲ့ဓာတ်မတည့်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ကိုမေးမြန်းပြီးမှ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
← ကန်ဇွန်းဥရဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ
အိမ်သုံး အောက်ဆီမီတာ တိုင်းတာရာတွင် သတိထားစရာ အချက်များ →